Blake Live dia nanenjika ny làlany teo amin'ny lalan'i Met Gala-2018
Ny zava-misy dia ireo kintana Hollywood izay 30 taona Blake Lively, izay nanjary nalaza noho ny anjara andraikiny tao anatin'ireo horonantsary "Otmel" sy "Gossip Girl", dia tia akanjo fitondra malaza - fantatra nandritra ny fotoana ela. Ao amin'ny pejiny ao amin'ny tambajotra sosialy, ny mpilalao sarimihetsika dia mamoaka sary matetika amin'ny sary samihafa, manome azy ireo karazana fanehoan-kevitra isan-karazany. Na dia izany aza, ny endriky ny Blake teo amin'ny karipetra mena an'ny Ball Institute costume tamin'ity taona ity dia nahatonga fahatsapana tena, satria nahitana sary mahatalanjona.
Ny akanjo Live dia noforonina nandritra ny 600 ora
Talohan'ny mpanao gazety tao anaty karipetra mena, ny kintanin'ny sarimihetsika 30 taona dia niseho tao anaty akanjo maotina, nosoratan'i Donatella Versace. Ny akanjon'ilay akanjon'ilay akanjo dia misy kavina manaingo ny volony sy ny antsasak'adiny, izay nanjaitra akanjo roa: lava sy lava lava, misokatra eo anoloana, toy ny lamasinina lehibe. Tiako ny hiteny teny vitsivitsy momba ny hoe manao akanjo lava ny Lively. Ao amin'ny vokatra azonao jerena diamondra sy emeralda maromaro marobe, izay nampifangaroina tamim-piraiketana miloko manerana ny efitrano. Manampy an'i Donatella miaraka amin'ny fanehoana an'io akanjo tsara tarehy io ilay nalaza nalaza atao hoe Lorraine Schwartz ary tena nahomby izy io. Ankoatra ny vokatra ao amin'ny Blake, afaka mahita zavaboary hafa an'ny Schwartz ianao. Tao anaty karipetra mena, nalain'ilay mpilalao horonam-bolo ny vatany, izay nitovitovy tamin'ny ravina misy kavina sy diamondra tsara tarehy, kavina vita amin'ny volamena sy emeralda, ary metaly maromaro.
Fanoratana volo avy amin'i Lorraine Schwartz
Taorian'i Lively dia nametraka ity vokatra hentitra ity, nanapa-kevitra ny haneho hevitra momba an'i Versace izy, nilaza ireto teny manaraka ireto momba ilay akanjo:
"Rehefa fantatro fa nanana fahafahana nanamboatra akanjo ho an'ny Lively aho, nampahafantariko azy avy hatrany tamin'ny sary an-tendro izy. Mino aho fa ilaina ny manamboatra akanjo izay hanamafisana ny hatsaran-tarehiny. Niaraka tamin'i Lorraine izahay dia nanamboatra sarisary ary nahatsapa avy hatrany fa iray ihany ny lamba tsy azonay atao. Nanapa-kevitra ny hanao akanjo mba hampidirana vato be dia be izay hamela an'i Blake hamirapiratra. Mieritreritra aho fa nanao izany izahay, satria maro no avy amin'ny endriky ny fiainana mahafinaritra. Farafaharatsiny, te-hiteny teny vitsivitsy mikasika ny faharetan'ny fotoana niasanay tamin'ity akanjo ity izahay. Miaiky aho, fa ny marina rehetra, ny embroidery rehetra dia asa tena mahomby. Vokatr'izany dia naharitra 600 ora ny akanjo. Na dia ho ahy aza, toy ny mpanao sary sokitra, dia tena be. "
Dress Lively - ny asan'i Versace sy Schwartz
Tsy afaka naneho hevitra momba ny tenako mivantana aho, nilaza momba ny famoronana ny marika Versace:
"Mbola tsy nisy akanjo tsara tarehy toy izany hatramin'izao. Mahafaly ahy ny manaporofo fa tsy azo lazaina amin'ny teny izany. Sangisangy izay tianao hijery ora maro. Velom-pankasitrahana an'i Donatella sy i Lorraine aho noho izy namorona fahagagana ho ahy. "
Nanjary fantatra hoe nahoana ny sary rehetra avy amin'ny Instagram Blake Lively
Gigi Hadid dia nanadihady an'i Blake Lively ho an'ny Bazaar Harper
Faly ny mpankafy amin'ny Dress Lively
Taorian'ilay mpilalao sarimihetsika 30 taona naneho ny sangan'asa iray avy amin'i Donatella Versace, ny tambajotra dia nanana fanamarihana maro be momba ity drafitra manaraka ity: "Tiako foana ny fomba nataon'i Donatella, fa ny zava-bitany dia nihoatra ny zavatra andrasana rehetra. Manam-pahaizana amin'ny asany izy. Satry tsara tarehy iray ary i Blake dia afaka manolotra azy amin'ny endriny tsara indrindra. "" Tsy azo atao ny maka sary an-tsaina ny fomba tsara indrindra. Nanome asa tsara i Donatella sy Lorraine. Namorona sarimihetsika tena mpanjaka izy ireo, "Miaina amin'ny karipetra mena toy ny mpanjakavavy ny velona. Tena tsara tarehy ary tena izy izany. Tiako foana ny fomba fiasan'i Versace, saingy ity sary ity dia ambony noho ny zavatra rehetra andrasana, "sns.
Nandeha tany Disneyland i Katy Perry sy Orlando Bloom ary nihira tamin'ny karaoke
Celine Dion dia niarahaba ny reny nandritra ny faha-90 taonany niaraka tamin'ireo rahavavy sy rahalahy 11
Axl Rose dia nanjary solon'ny AC / DC
Rosie Huntington-Whiteley dia nampiseho ny zanany kely voalohany
Uma Thurman dia nandeha tany amin'ny US Open niaraka tamin'ny olon-tsy fantatra tsy fantatra
Kim Kardashian dia nanome ny reniko indrindra ny andro nahaterahana indrindra!
Nolavin'i Nicole Scherzinger ny fanamarihana ny "Dihy Dirty" noho ny fanalan-jaza
Ny fitsapana nataon'i Eysenck ho an'ny tempera
Ny dikan'ny Numbers ao amin'ny Fiainan'ny Olombelona
Womans elegant dress
Antsoy ny ankizy: nanome endrika tarehin'olombelona ilay mpanakanto Smeshariki!
Toeram-pisakafoanana any Belgorod
Ny fitsaboana ny anemia amin'ny vehivavy
Kassettes teo aloha
Pacifier fitsapana hafanana